यौनिक कुराकानीमा रमाउँदै हुनुहुन्छ ? – उज्यालो खबर
यौनिक कुराकानीमा रमाउँदै हुनुहुन्छ ?
अनलाइन माध्यामबाट आफ्ना साथीसँग यौनजन्य कुराकानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसमा मलजल गरिरहेका मोवाइलमा प्रशस्तै भेटिने, डेटिङ एवं म्यासेजिङ एपहरुले ।
यस्तै एपको माध्यामबाट प्रेम र रोमान्सका उन्मुक्त कुराकानी गर्नेहरुको जमात बढ्दो छ । यसमाथि न कसैले प्रतिवन्ध लगाउन सक्छ, न निगरानी नै । प्रविधिसँग एकाकार भइरहेका अहिलेका पुस्तामा यौनिक कुराकानी (सेक्सटिङ) एक नयाँ ट्रेन्डको रुपमा विकास भइरहेको छ ।
फगत मनोरञ्जनका लागि गरिने यस्ता क्रियाकलापले कहिले काहीँ जोखिममा पार्न सक्छ । त्यसैले यौनिक कुराकानीका क्रममा आवश्यक सचेतना एवं सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।
१. के तपाईं सेक्स च्याट गर्ने व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ ?
यदि तपाईं आफ्नो साथीसँग टाढा हुनुहुन्छ भने वा साथीसँग लामो समयसम्म भेट्न सक्नु भएको छैन भने अनलाइनबाटै यौन उत्तेजना कम गर्न वा यौन जीवनको आनन्द उठाउनको लागि पनि यो अपनाउने गरिन्छ ।
तर धेरैजसो केटाहरु एक अपरिचितसंग यस्तै गर्न को लागि तयार छन्। यसको कारण, उनीहरु ब्ल्याकमेल को शिकार हुनु पर्छ । किनभने, केटाहरु कुनै पनी सोच बिना अनलाइन केटी संग सेक्स च्याट गर्न को लागी तयार छन्। तर तपाइँलाई थाहा नहुने मानिसहरु संग यस्तो कुराकानी नगर्नुहोस् ।
धेरै पटक केटाहरु ट्विटर, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन जस्तै सामाजिक मिडिया सञ्जालमा गएर केटीहरुसँग जिस्किन थाल्छन् । तर उनीहरु सचेत हुनुपर्छ कि यसो गर्दा उनीहरु समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले यस्तो च्याट गर्दा आफ्नी प्रेमिका बाहेक अरुसँग यस्तो नगर्नुहोस् ।
सुरक्षित एप छान्नुहोस्
यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो कि यौनिक विषयमा च्याट गर्नको लागि एक सुरक्षित अनुप्रयोग छान्नुहोस् । धेरै पटक तपाईंले सुन्नु भएको हुन सक्छ कि निजी भिडियो वा फोटोहरु धेरैको लिक हुने गर्छन् । त्यसका कारण कतिपय केटीहरुले आत्महत्या समेत गर्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसैले सेक्टिङको लागि सुरक्षित एप चुन्नुपर्छ । फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सञ्जालमा यस्तो गतिविधि कहिल्यै नगर्नुहोस् । एकले अर्काेलाई यसमा दबाब दिए पनि अन्य सुरक्षित माध्यमबाट मात्रै यस्तो प्रयोग गर्नुहोस् ।
फोटो र भिडियो डिलिट गर्न नभुल्नुहोस्
यदि तपाईंहरुबीच नग्न फोटो वा भिडियोको कारोबार भएको छ भने यो मेटाउन नभुल्नुहोस् । समयमा नै डिलिट नगर्दा डाटा ह्याक भएर यस्ता सूचनाहरु चुहावट हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ ।
सेक्सटिङको बारेमा बनेका कानुनहरु
नग्न तस्वीर वा भिडियो प्रसारण अपराधको श्रेणी अन्तर्गत आउँछ । यसका लागि केही मुलुकहरुमा सरकारले कानुन बनाएको छ । नेपाल भारत लगायतका मुलुकमा यस्तो कार्य प्रतिबन्धित छ । किनकि धेरै पटक हामी नपठाईने तस्बिरहरु वा भिडियोहरु सेक्सटिङको समयमा साझा गर्न सक्छौं ।
बाल यौन भिडियोको प्रचार नगर्नुहोस्
बाल पोर्नोग्राफी अर्थात् बाल यौन भिडियोको सम्बन्धमा विश्वभर कडा कानुन बनाइएको हुन्छ । तसर्थ, नग्न फोटो वा बच्चाहरुको आपत्तिजनक भिडियो कहिलै पनि साझा नगर्नुहोस् । कानुन अनुसार यसो गर्नु पनि अपराध मानिन्छ ।